FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ASPIN - ALIKA
Fampahalalana momba ny fiompiana alika Aspin
Alika King the Aspin, 10 volana avy tao Bacolod City, Philippines
Alika an-dalambe filipiana
Na dia somary tsy mitovy aza ny ankamaroan'ireny alika ireny dia misy toetra sasany izay mitovy amin'ny ankapobeny. Izy ireo dia salantsalany amin'ny habeny, mazàna manana volom-bolo misavoana kokoa, ary manana palitao fohy mety ho loko isan-karazany. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ireto alika ireto dia volontany, fotsy, mainty, misy tasy misy loko, na manana palitao boribory. Ny sofin'izy ireo dia mety ho maranitra na misolelaka, mazàna dia lava ny halavany ary fantany fa mitazona ny lohany ambony izy ireo.
Ny aspina dia fantatra fa tsara fanahy sy be fitiavana amin'ny olona rehetra. Alika tompon-tany any Filipina izy ireo ary matetika hita mivezivezy eny an-dalambe na dia lasa alika an-trano aza izao. Milamina sy faly ary mifankahazo tsara izy ireo ankizy . Amin'ny ankapobeny, tsy misy zavatra ratsy momba an'io karazany io satria ambany loatra ny fikolokoloana sy ny mahafinaritra azy ireo.
Haavony: 12—20 santimetatra (30-51 cm)
heeler manga sy fifangaroan'ny pitbull
Ny aspins dia tsy manana olana ara-pahasalamana lehibe tokony hotandremana. Toy ny biby hafa rehetra, ento any amin'ny mpitsabo biby izy ireo raha te hijery fizahana mahazatra.
Ny Aspins dia alika antonony mety tsara amin'ny trano na trano raha mbola manao fanazaran-tena isan'andro. Tsy mila fikojakojana kely izy ireo ary mahaleo tena kokoa hatramin'ny nahalehibe teny amin'ny arabe. Raha manana tokontany ianao dia alao antoka fa fefy io raha tsy izany dia fantatra izy ireo fa mandeha mandehandeha manodidina ny faritra.
terrier omby sy ny bulldog Mix
Ireo alika ireo dia tsy mila fanatanjahan-tena avo lenta. Raha mbola mandeha isan'andro izy ireo na mafy ny mivoaka sy mitrandraka dia faly sy afa-po izy ireo. Any Filipina, ireo alika ireo dia fantatra matetika fa mandehandeha eny amin'ny manodidina sy eny an-dalambe ary afaka mahita ny lalana mody mody rehefa mody ny masoandro. Tena marani-tsaina eny an-dalambe izy ireo ary tsy mila fiheverana be.
Manodidina ny 10—14 taona
Ankizy 4—6 eo ho eo
Manana palitao fohy ireto alika ireto ary tsy mila taovolo matetika. Omeo fandroana izy ireo rehefa ilaina izany.
Ny anarana Aspin dia kinova fohy amin'ny 'asong Pinoy' izay azo adika amin'ny alika tompon-tany. Ireo alika ireo dia tsy manana razambe manokana izay nandray anjara tamin'ny zavatra toa azy ankehitriny. Raha ny marina, na dia ankehitriny aza, tsy misy fijery manokana ho an'ny karazana Aspin. Izany dia satria izy ireo dia nateraka tamina karazana mutts sy karazany mifangaro izay mandehandeha any amin'ireo nosy Filipina. Io fomba fiompiana io dia mahatonga ny alika Aspin ho salama kokoa noho ny ankamaroan'ny karazany hafa satria nompana voajanahary izy ireo fa tsy ny olona manambatra alika sasany mandra-panambadiany. Io fizotran-javatra io dia mahatonga azy io mba tsy hisy firoboroboana firy izay mitondra amin'ny olana ara-pahasalamana kely kokoa sy karazany voalanjalanja kokoa satria mizara toetra maro samihafa. Mazava ho azy, ny Aspins dia manodidina ny hahavony, manana palitao fohy ary fiasa mitovy amin'izany. Satria ireo alika ireo dia tsy notezaina noho ny mampiavaka azy manokana, dia afaka mizara toetra maro samihafa izy ireo manomboka amin'ny alika iray mankany amin'ny manaraka. Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'izy ireo dia milamina, manan-tsaina, mahaleo tena, milalao ary sariaka. Ny sasany milaza fa taloha, Aspins maro no nampiasaina ho alika mpiambina izay mahatonga ny sasany amin'ireo alika ireo ho mora mitandrina amin'ny olon-tsy fantatra. Androany, ny Aspins dia nanjary nalaza kokoa tao Filipina na tao an-tranon'ny olona na tamin'ny mpiasa. Ny Tafika Filipiana dia mampiasa alika Aspin 40 mahery izao hanampiana azy ireo amin'ny asa samihafa. Tamin'ny taona 2016, Aspin iray antsoina hoe Roy dia nahazo mari-pankasitrahana noho ny fanampiana tamin'ny ekipa fikarohana sy fitadiavana taorian'ny asa fitoriana famonjena. Amin'ny tranga hafa dia nisy alika Aspin nitsambikina teo alohan'ireo tanora roa lahy mba hamonjy azy ireo tsy ho voadonan'ny moto. Rehefa henon'ny olona erak'izao tontolo izao fa naratra mafy ilay alika dia tarehiny, vola avy amin'ny firenena 45 mahery no nangonina ho an'ny famerenam-bola ho an'ny alika. Androany, ny Aspin dia manohy miakatra ho alika malaza any Filipina saingy tsy dia fahita any amin'ny firenen-kafa izy ireo.
AFP = Tafika mitam-piadiana ao Filipina
PDAA = Fikambanan'ny atletan'ny alika Filipina
rehefa mba manomboka housebreaking ny alika
fifangaroan'ny bluetick sy walker hound
Top 10 alika izay hanaikitra ny tena